Voadika ny 07 Febroary 2013 2:47 GMT
Tamin'ity taona ity, nifarana tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina izay nahavaka ny saina, ireo tranga tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Karaiba. Tamin'ny Janoary 2012, maty noho ny fitokonana tsy hihinan-kanina nataony nandritra ny roa volana tany aloha ilay Kiobana iray gadra noho ny firehany, Wilman Villar Mendoza. Tamin'ny 5 Desambra 2012, namarana ny 21 nitokanany tsy hihinan-kanina ny Dr. Wayne Kublalsingh, teratany avy ao Trinidad mafàna fo amin'ny resaka tontolo iainana , niainga avy amin'ny fanomezan-toky azony fa hampanao fanadihadiana tsy miankina mikasika ny ampahan-dàlana natolotra izay nolavin'ny vondrona misy azy ny governemanta, ny Hetsika “Highway re-route”, na “Hetsika familiana soritra ilay lalambe migodàna) ary ireo Vondrom-piarahamonim-pirenena sivily isan-karazany. Milaza ny hamaron'ny hadisoam-panatenana tsapan'ny vahoaka Karaibeana mikasika ny fahaizan'izy ireo mihaino ny feony ity firohotana any amin'ny fitokonanana tsy hihinan-kanina ity. Ity misy jery todika – isam-pirenena – eo amin'ny olana sasany amin'ny faritra izay niteraka resabe misy lanjany teo amin'ny aterineto tamin'ity taona ity…